Nleba - libya-canada.org
Liverpool v Burnley: Nleba Premier League
Liverpool ga-ele anya itinye nkwụchi iko Premier League ha mgbe Burnley rutere Anfield na Tọzdee a.
Ugbu that an’egwuregwu na-enweghị mmeri nke egwuregwu anọ na elu elu, na-agba naanị otu ugboro na agba ọsọ ahụ, ọ dị mma ịsị na Liverpool agbatuola.
Ọgbụgba bọọlụ ndị Reds na Manchester United gbara na-adịbeghị anya mechara kwụsị ịgba egwu na goolu na 42 Premier Leaguen’ụlọ egwuregwu na esepu. Nke ahụ kwuru, Liverpool ka nọ na-akwado egwuregwu 68-enweghị mmeri Premier League na Anfield.
Ọ bụrụ na ụdị goolu Liverpool bụ ihe na-enye nsogbu, mgbe ahụ ụda olu ahụ ga-ada ụda na Turf Moor. Burnley enwetala goolu itoolu n’ime asọmpi egwuregwu iri na asaa n’oge a – ọgụ kachasị elu.
Ndị Clarets enwetala naanị otu goolun’ime egwuregwu asaa ha gara aga, na nke ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ nke onwe. Otu egwuregwu Sean Dyche naanị otu mmerin’oge a bịara na Emirates Stadium, jiri mmeri ise d e atọ dọtan’ebe ndị ọzọ.
Onye na-agbachitere Liverpool Joel Matip nwere ike ịlaghachi na mmerụ ahụn’abalị a, mana Diogo Jota na-agan’ihu ịnọdụ ala maka akụkụ Jurgen Klopp.
Charlie Taylor nwere ike ịlaghachi maka Burnley, mana Jimmy Dunne na Bailey Peacock-Farrell na-ele anya na-agaghị anọ maka Clarets.
Gamble t Liverpool v Burnley Ebe a.
Fulham v Manchester United: Nleba Premier League
Manchester United ga-achọ idobe ụgwọ isi ha d e Premier League mgbe ha gara Fulham na Craven Cottage na Wenesde a.
Ndị Red Devils dị ugbu a t asọmpi iri na otu na-enweghị mmeri na njikọ, mana ike gwụrụ ha izute otu Fulham nwere naanị otu mmeri na asaa gafee asọmpi niile.
Manchester United emeriwo egwuregwu anọ ha gara na Craven Cottage website t ngụkọta nchịkọta nke 12-1 ma gafee otu afọ kalenda na-enweghị mmeri ọpụpụ na Premier League.
Onye egwu Serbia Aleksandar Mitrovic nwere ike ịlaghachi d e Fulham ebe ọ laghachitere website t mmerụ ahụ. Ruben Loftus-Cheek nwekwara ike ịlaghachi na otu, ebe ọ bụ na ọ bụ onye na-erughị eru izute Chelsea nne na nna na ngwụsị izu.
Bobby Decordova-Reid na Antonee Robinson bụcha ndị that a kwụsịtụrụ maka akụkụ Scott Parker, ebe Terence Kongolo ka merụrụ ahụ.
Ole Gunnar Solskjaer’s Red Devils na-anọghị na Brandon Williams na Phil Jones.
Gamble t Fulham v Manchester United ebe a.
Manchester City v Aston Villa: Nleba Premier League
Manchester City ga-ele anya ịkwagan’elu tebụl Premier Leaguen’abalị a, ebe Aston Villa gara Etihad Stadium.
Websiten’inwe mmeri asatọ d e asọmpi niile, yana ịgba ọsọ nke egwuregwu 15 na-enweghị mmeri, Manchester City na-apụta ngwa ngwa dịka ọkacha mmasị iji merie Premier Leaguen’oge a.
Otú ọ dị, Aston Villa na-enwe oge dị egwu, ọ ga-abanyen’egwuregwu nke abalị a zuru ike. N’ihi ntiwapụ nke COVID-19 na klọb, Villa anaghị egwu egwuregwu Premier League kemgbe Jenụwarị 1.
Akụkụ Dean Smith ga-ebili ọsọ ọsọn’abalị a. Aston Villa efuola 14 nke nleta 15 gara aga na Manchester City.
Sergio Aguero na Aymeric Laporte ga-anọgide na-anọghịn’akụkụ Pep Guardiola, mana Kevin de Bruyne na-atụ anya ịlaghachi.
A na-atụ anya t ndị otu Aston Villa ga-enwe mmetụta dị ukwuu d e nsogbu ha na nso nso a t Coronavirus, mana Ross Barkley nwere ike ịpụta mbụ ya na ọnwa abụọ, ebe ọ gbakere website Id nsogbu hamstring.
Nzọ t One Man City v Aston Villa ebe a.
Leicester City na Southampton: Nleba Premier League
Ndị Southampton nwere mmerụ ahụ ga-agba mbọ ịgan’ihu na ịchụso ndị anọ dị elu mgbe ha na-aga King Power Stadium na Satọde.
Ndị na-apụ apụ merie nzukọ anọ gara agan’etiti akụkụ abụọ a, ọkachasị mgbe Leicester City gbara ndị mmeri 9-0 na oge ikpeazụ nke St. Mary.
Agbanyeghị, akụkụ Ralph Hassenhuttl meriri nkwụghachi azụ 2-1 t One King Power Stadium.
Ndị Foxes nọ ugbu a t agba ọsọ kachasị dị ogologo nke oge a, na-efughi d e egwuregwu anọ. Agbanyeghị, Southampton na-achọ inweta klọb ndekọ egwuregwu asaa Premier League na-apụ apụ na-enweghị mmeri.
Leicester City nabatara Jamie Vardy na James Maddison website t mmerụ ahụ. Kaosinadị, Cengiz Beneath, Ricardo Pereira na Dennis Praet niile atụfuru ndị Foxes.
Southampton nwere ike ịhapụ ọtụtụ ndị egwuregwu kachasị ahọrọ gụnyere Danny Ings, Oriel Romeu, Moussa Djenepo na Jannik Vestergaard. Che Adams na Alex McCarthy yiri ịlaghachi maka ndị nsọ.
Nzọ na Leicester v Southampton ebe that a
Fulham na Chelsea: Nleba Premier League
Fulham nabatara Chelsea na Craven Cottage maka ọdịda London London na mgbede Satọde a.
Ndị otu Scott Parker adọtala egwuregwu ise Premier League ha ikpeazụ, adorable were ezigbo mmụọ batan’egwuregwu a ebe ha si na London Derby pụta na Spen.
Agbanyeghị, Fulham enweghị mmerin’egwuregwu 19 gara aga ha na Chelsea gafere asọmpi niile.
Frank Lampard’s Chelsea efuola anọ n’ime asọmpi isii Premier League ha gara aga.
Mario Lemina na Tom Cairney enwetaghị Fulham, mana Aleksandr Mitrovic nwere ike ịlaghachi maka ndị ọcha.
Reece James na Andreas Christensen ga-alaghachi Chelsea. N’golo Kante kwụsịtụrụ.
Nzọ na Fulham v Chelsea ebe that a